रोईरहेकी शिल्पाको लागि मध्यरातमा छबिले लेखे यस्तो स्टाटस ! – ईमेची डटकम
रोईरहेकी शिल्पाको लागि मध्यरातमा छबिले लेखे यस्तो स्टाटस !
छवि शिल्पा सम्बन्ध चिसिएको केही दिनपछी शिल्पा एक अन्तरबार्तामा देखिईन । त्यस अन्तरबार्तामा शिल्पा लगभग अन्तरबार्ता भरिनै रोईन । उनले आफ्नो पीडा पोखिन, सुनाईन । उनका अनुसार धेरै समय देखि उनले यस्तो पीडा भोगेकी थिईन कि उनी भोलिपल्ट सुटिङ जानुछ भने पनि खाना बनाएर फ्रीजमा राखेर जानुपर्थ्यो । यस झगडामा कुनको कानको जाली फुट्ने गरि हानेको आरोप छवि माथी छ । छवि भने यो कुरालाई स्विकार्दैनन तर शिल्पालाई डाक्टरले केही दिन स्पिकर बजेको स्थान नजिक नबस्न सुझाव दिएका छन ।